Fake kay ilay buzz, tena faikany sy fako e - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny fampiasana tambazotra
Fake kay ilay buzz, tena faikany sy fako e
Maty namono tena hono i Fiffie. Kay tsy maty indray izy aza mandray anjara amin’ny commentaire. Misy isaintsainana izany. Jereo ny post io ambany io. Somary lava.
“Maty namono tena i Fiffie”. “RIP Fiffie”, dia nahazo RIP maro ilay vaovao. Ny RIP dia fanafohezana ny fomba fiteny Rest In Peace izay hadikan’ny olona sasany ho MAP. Ny MAP indray dia halavaina ho Mandria Am-Piadanana fa tsy ilay Madagascar Action Plan na Madagasikara Am-Perinasa nahazatra teo aloha akory.
“Maty namono tena i Fiffie”. Famonoan-tena nateraky ny fihotanam-pon’ity tovovavy taorian’ny fahitany ny sariny mikarenjy eny anivon’ny tambazotra facebook. Ilay sary nankafiziny ary tena niangalian’ny mpaka sary tokoa. Ilay sary somary miboridana ary maka paozy… eny azonao an-tsaina ny tian-ko tantaraina (pose suggestive).
Fiffie dia tovovavy Malagasy iray tia alaina sary na mitafy izy na tsia. Voalaza fa isan’ireo manenjika ny hetsika antsoina hoe “shotting” ireny ity tovovavy ity. Mannequinnat ! Tetik’ady sy fandaharana mahasarika ireo tovovavy ny “mannequinnat”. Mampiseho ny bikany. Mitaky fananana press-book. Mizara ny sariny amin’ny namana. Amin’ny namany ! Saingy… Misy ireo namana tsy mahafehy tanana anefa fa mizara amin’ny naman’ny namana ka tafavoakan’ny valan’ny mpinamana akaiky ny sary. Tsy nahim-pon’i Fiffie ny niparitahan’ny sary araka izany. Tsy zakan’ny sainy, hono.
Dia nahoraka amin’izay ary ny vaovao fa maty namono tena i Fiffie vokatry ny alahelo noho ireo sariny niparitaka ivelan’ny valan’ny mpinamana taminy. Toa hoe izany tovolahy niaraka taminy izany no nanaparitaka ny sary. Toa hoe ilay orinasa mpaka sary (manao ireny shotting ireny) no nanaparitaka ny sary. Hono hono izany rehetra izany. Ny vokany mitovy ihany. Niparitaka tamina kaonty Facebook iray mpamoaka sary mamoafady ireo sarin’ity tovovavy jefijefy.
Tao ireo tezitra tamin’ilay mpiandraikitra (admin hoy ny fiteny mahazatra na administrateur) an’ilay kaonty ireo mpiserasera indrindra ireo naman’i Fiffie. Tsy valahara, tsy matahotra an’Andriamanitra… aza tratrako… Ilay admin amin’io tsy fantatra satria tsy nampiseho ny tena endriny amin’ny photo de profil. Nanome tsiny an’ilay admin ny mpiserasera satria nandeha ny feo fa tsy nahazo alalana tamin’ny tompon’ny sary ilay admin fa nanaparitaka avy hatrany.
Tao ireo nanenjika an’i Fiffie. Raha mba nahay nitandrina… Raha nanana fitondran-tena maotina izao ilay zazavavy… Raha… hoy ireo olona nosokajiana ao an’ity vondrona iray ity. Vokatry ny fanaovana an’ireny “duck face” paozy mampiseho bika. Izao no vokatry ny fivoaran’ny teknolojia ihany koa satria te ho mpaka sary daholo ny olona tsirairay noho ny fisian’ny fakan-tsary nomerika itony. Na ny tena ihany aza dia afaka maka ny sarin’ny tena (selfie).
Ny vondrona fahatelo dia tsy mankasitraka ny fanenjehana an’ireo mpiandraikitra ny “Gazetim-…” tsy nosoratana feno ilay anaran’ny kaonty. Andron’ny fisian’ny fahalalahana izao. Liberté d’expression, démocratie… Ny internety koa sarotra fehezina, ny fanjakana rahateo tsy maharaka. Ny gazety antsoratra sy ireo haino aman-jery miteniteny foana aza tsy hita izay ataony ka izay internety ve no hiandrasana azy !
Ny vondrona fahefatra dia ireo nampita fananarana ho an’ny tanora rehetra tsy an-kanavaka. Mila mahay mifehy tena amin’ny resaka zaraina amin’ny tambazotra ifaneraserana. (TTF. Efa nisy ireo hafatra nampitaina tao amin’ny rubrique NTIC milaza fa misy mpampiasa no mijery ireny kaonty amin’ny réseaux sociaux ireny rehefa hifantina ny mpiasa ho raisiny izy). Tsy ho an’ny tanora irery ihany izany. Ho an’ny olona rehetra fa tsy ny tanora irery ihany. Ho an’ny olona izay mampiasa ny tambazotra mampifandray olona na réseaux sociaux. Eny fa na dia tsisy afa-tsy 2%-n’ny Malagasy ihany aza hatreto no manana fahafahana mampiasa ny internety eto Madagasikara raha efa maherin’ny 20% izany any Senegaly ohatra.
Nalaza ny vaovao. Buzz ny anaran’ny vaovao malaza sy miparitaka be eo amin’ny internety. Buzz izy raha vaovao marim-pototra.
Vao mainka nisavoritaka ny mpiserasera rehefa nandre fa tsy maty indray i Fiffie. Tsy namono tena izany izy. Fa ireo mpankahala no nilaza ny famonoan-tenany. Fake indray no anaran’ny fampitam-baovao tsy marina tahaka izao raha ho an’ireo mpampiasa internety (internautes).
Tena resaka marikoriko ity resaka indray mandeha ity. Resaka fake, toa mitovy faneno amin’ny resaka faikany sy resaka fako. Rehefa jerena mantsy dia nahazo zem (j’aime) bdb (be dia be) mihoatra ny 5 000 isa ny sasany amin’ireny page ambara fa maloto ireny. Raha ny page mpilaza vaovao sasany anie ka tsy mahazo afa-tsy zem vitsivitsy fotsiny e ! Dia eo vao mihatsaravelatsihy fotsiny ny sasany satria ny olona akaiky azy no voadona. Misy ireo page na groupe mpizara vaovao izay an’arivony iray na roa no mpikambana ao aminy na dia vaovao mahaliana aza no hita ao. Misy ireo pejy “vetaveta” no mahazo j’aime bdb (fomba fanoratana ny be dia be io eny amin’ny tambazotra).
Fehiny, sitra-pon-dRalakamisy (izaho Ratalata no miteny izany tpt aho manoratra azy) no nanambadiany Ambaniandro. Mahaiza mizaka ny vokatry ny safidy. Ataovy marim-pototra ilay safidy dia tsy ho diso fanantenana ianao. Jereo tsara izay hametrahana ny tongotra mba tsy ho voafandrika. Ny ratsy anie tsy kely lalana e. Ny mpiara-belona ihany koa efa nanadino ny lala-mahitsy. Firifiry izay olom-piangonana voafitaka izay. Firifiry izay olom-piangonana namitaka izay. Ny mitandrina mba tsy ho vaky andrina no mety rahavako. Ny namana anie ka hanoratra RIP rehefa lasa ianao ary ny mpankahala hilaza hoe mdr (mort de rire) na tpt (tapa-tsinay).